Marka 8 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
8 Tamin’izany andro izany, dia nisy vahoaka be indray teo, ary tsy nanan-kohanina izy ireo. Koa nasain’i Jesosy nankeo aminy ny mpianany ka nilazany hoe:+ 2 “Mampalahelo ahy+ ny vahoaka, fa efa telo andro izao no nitoerany teto amiko ary tsy manan-kohanina izy. 3 Raha alefako mody tsy mihinan-kanina ireo, dia ho reraka eny an-dalana. Avy lavitra anefa ny sasany.” 4 Fa hoy ny navalin’ny mpianany azy: “Aiza atỳ amin’ity toerana mitokana ity no hahitana mofo hahavoky ireo olona ireo?”+ 5 Mbola nanontaniany ihany anefa ireo hoe: “Manana mofo firy ianareo?” Dia hoy ireo: “Fito.”+ 6 Koa nasainy nandry ilika teo amin’ny tany ny vahoaka. Ary noraisiny ny mofo fito ka nisaotra+ an’Andriamanitra izy. Dia notapahiny izany ka nomeny ny mpianany mba haroso. Koa naroson’ireo tamin’ny vahoaka izany.+ 7 Nanana trondro madinika vitsivitsy koa ireo. Rehefa avy nisaotra an’Andriamanitra izy, dia nasainy naroso koa izany.+ 8 Koa nihinana ny olona ka voky, ary nangoniny ny sombintsombiny sisa tsy lany ka nahafeno sobika fito.+ 9 Lehilahy tokony ho efatra arivo anefa no teo. Ary noravany ny olona tamin’ny farany.+ 10 Niakatra avy hatrany tao an-tsambokely izy sy ny mpianany ka tonga tany amin’ny faritr’i Dalmanota.+ 11 Ary nivoaka ny Fariseo ka nanomboka niady hevitra taminy, eny, nitady famantarana avy any an-danitra ireo mba hitsapana azy.+ 12 Koa nalahelo mafy+ i Jesosy tao am-pony tao ka niteny hoe: “Nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy misy famantarana homena an’ity taranaka ity.”+ 13 Ary nandao an’ireo izy ka niakatra an-tsambokely indray, dia nankeny ampita. 14 Ary nanadino nitondra mofo ny mpianatra, ka tsy nanana afa-tsy mofo iray monja izy ireo tao an-tsambokely.+ 15 Ary nodidian’i Jesosy mazava ireo hoe: “Aoka ho mailo hatrany ianareo, ka mitandrema amin’ny lalivain’ny Fariseo sy ny lalivain’i Heroda.”+ 16 Koa niady hevitra ireo satria tsy nanana mofo.+ 17 Tsikaritr’i Jesosy izany, ka hoy izy tamin’ireo: “Nahoana ianareo no miady hevitra noho ny tsy fanananareo mofo?+ Mbola tsy takatrareo na azonareo ihany ve? Donto ve ny fonareo ka tsy azonareo ny hevitr’izany?+ 18 ‘Mana-maso ve ianareo nefa tsy mahita, ary manan-tsofina nefa tsy mandre?’+ Tsy tadidinareo ve 19 ny nanapahako mofo+ dimy ho an’ny dimy arivo lahy? Nahafeno harona firy ny sombintsombiny voangonareo?” Dia hoy ireo taminy: “Roa ambin’ny folo.”+ 20 “Ary rehefa nanapaka ny mofo fito ho an’ny efatra arivo lahy aho, nahafeno sobika firy ny sombintsombiny voangonareo?” Hoy ireo taminy: “Fito.”+ 21 Koa hoy izy tamin’ireo: “Mbola tsy azonareo ihany ve ny hevitr’izany?”+ 22 Nony tonga tao Betsaida izy ireo, dia nentin’ny olona nankeo aminy ny lehilahy iray jamba. Ary niangavian’ireo izy hikasika+ an’ilay jamba. 23 Dia notantanany ralehilahy ka nentiny nankany ivelan’ny tanàna. Ary nororany+ ny masony, ka nametrahany tanana izy sady nanontaniany hoe: “Misy zavatra hitanao ve?” 24 Ary niandrandra ralehilahy ka niteny hoe: “Olona no hitako, satria toy ny hazo no hitako nefa mandehandeha.” 25 Ary napetrany teo amin’ny mason-dralehilahy indray ny tanany, dia nahita tsara izy. Ary sitrana izy, ka hitany mazava tsara ny zava-drehetra. 26 Koa nalefan’i Jesosy nody izy, nefa nilazany hoe: “Aza mbola miditra ao an-tanàna aloha.”+ 27 Ary niala teo i Jesosy sy ny mpianany ka nankany amin’ireo tanàna any Kaisaria-Filipo. Teny an-dalana, dia nanontany ny mpianany izy hoe: “Lazain’ny olona ho iza moa aho?”+ 28 Dia hoy ireo taminy: “Jaona Mpanao Batisa.+ Milaza ny hafa hoe Elia,+ ary misy koa manao hoe ny iray amin’ny mpaminany.”+ 29 Koa nanontany an’ireo izy hoe: “Fa ianareo kosa milaza hoe iza aho?” Dia hoy ny navalin’i Petera azy: “Ianao no Kristy.”+ 30 Tamin’izay izy dia nandrara azy ireo mafy tsy hilaza ny momba azy na amin’iza na amin’iza.+ 31 Ary nanomboka nampianatra azy ireo koa izy fa tsy maintsy hijaly mafy ny Zanak’olona, sady holavin’ny anti-panahy sy ny lehiben’ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna ka hovonoina ho faty,+ ary hitsangana rehefa afaka telo andro.+ 32 Tsy niolakolaka mihitsy izy niteny izany. Nentin’i Petera hihataka kely anefa izy ary noteneniny mafy.+ 33 Ary nitodika izy, dia nijery an’ireo mpianany ka niteny mafy an’i Petera hoe: “Mankanesa ato ivohoko, ry Satana, satria tsy ny hevitr’Andriamanitra no eritreretinao, fa ny an’ny olombelona.”+ 34 Ary nantsoiny nankeo aminy ny vahoaka sy ny mpianany, ka hoy izy tamin’ireo: “Raha misy te hanaraka ahy, aoka izy handa ny tenany ka hitondra ny hazo fijaliany ary hanaraka ahy mandrakariva.+ 35 Fa izay te hamonjy ny ainy dia hamoy azy, ary izay mamoy ny ainy noho ny amiko sy ny vaovao tsara kosa dia hamonjy azy.+ 36 Fa inona tokoa moa no soa ho azon’ny olona raha mahazo an’izao tontolo izao izy nefa very ny ainy?+ 37 Fa inona tokoa moa no homen’ny olona ho takalon’ny ainy?+ 38 Fa na iza na iza menatra noho ny amiko sy ny teniko, eto amin’ity taranaka mpanitsakitsa-bady sy mpanota ity, dia ho menatra+ noho ny aminy koa ny Zanak’olona rehefa tonga amin’ny voninahitry ny Rainy izy, miaraka amin’ny anjely masina.”+